Baba Vanga က ၂၀၁၆ နှင့် နောက်လာမည့် အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာကြီးတွင် ဖြစ်လာမည့် ကြောက်စရာကောင်းသည့် အဖြစ်အပျတ်များ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ - LIFESTYLE » Ahmalay
Baba Vanga က ၂၀၁၆ နှင့် နောက်လာမည့် အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာကြီးတွင် ဖြစ်လာမည့် ကြောက်စရာကောင်းသည့် အဖြစ်အပျတ်များ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။
Thursday, February 2, 2017 Horoscope
ပုံမှန်ပြောစကားများအရဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ အနာဂတ်ကို သေသေချာချာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါ။ ကျွန်ုတေ်ာတို့အားလုံးဟာ အခုချိန်ထိ လွတ်လပ်မှုကို ပိုင်ဆိုင် မှုအတွတ်ကြောင့် ဒီလို နောင်ဖြစ်လာမည့် အကြောင်းကိစ္စ များကို သေချာ တပ်အပ်ပြောထားသောကြောင့် လူများ သံသယ ၀င်ကောင်း ၀င်နိုင်ပါသည်။ အံ့သြစရာကောင်းစွာ ဖြင့်ဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မတူညီသည့် လူအများစုက သူတို့ကို သူတို့ အနာဂတ်ကို ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောကြားသည်။ တစ်ချို့လူတွေက သတင်းသမားများ အာရုံစိုက်မှုကို လိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် သူတို့က စိတ်မနှံ့သူများလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အကုန်လုံးက ဟန်ဆောင်နေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ထဲထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် သူမ၏ အကြားအမြင်တွေက သင်ကြည့်နေကျ စိတ်ကူးယာဉ်ဆန်သည့် ရုပ်ရှင်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူမ၏ နာမည်က Baba Vanga ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဂရီယန် နိုင်ငံသူဖြစ်သည်။ သူမ သေဆုံးသွားတာဆိုရင် (၁၉၉၆) တစ်ဆယ့်ကိုး နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အသက် ရှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်သည်။ သူမ၏ ခွန်အား နှင့် သမိုင်းတွေက သူမ၏ ဟောကိန်းတွေကြောင့် အခုချိန်ထိ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ကွယ်ပျောက်သွားခြင်းမရှိသေးပါ။ သင်သိပါသလား သူမဟောကိတ်းထုတ်ခဲ့သော ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်စဉ်များ နှင့် ပူနွေးမှု အကြောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနစ်က လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ ဆူနာမီ ကိစ္စ၊ 9/11 တိုတ်ခိုက်မှု အကြောင်း၊ အခု အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား၏ လူမျိုး အကြောင်းတို့ကို ဖြစ်သည်။
သူမရဲ့ဟောကိန်းတွေက လူတိုင်းကို ကြက်သီးမွှေး ထ နေနိုင်သည်။
လာမယ့်နှစ်တွေ မှာဆိုရင် သူမ၏ ဟောကိန်းတွေက ပိုပြီး အားကောင်းလာလိမ့်မည်။
သေချာ တရုတစိုက် ကြည့်ပါ။
မွတ်စလင်တိုတ်ခိုက်ရေးသမားများသည် ဥရောပတိုတ်သို့ ၀င်ရောက်လာလိမ့်မည်။ ဥရောပတိုတ်ကြီး သေကြေ ဖျတ်ဆီးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘာမှကိုမရှိတော့ မည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပတိုတ်တွင် မည်သူမျှ နေထိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ကိန်းဂဏန်းအရ ပြောလျှင်တော့ သုည ပင်ဖြစ်သည်။
နောက်တွင် စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များကို ဗီးနပ်ဂြိုလ်မှ ရယူရလိမ့်မည်။
ရေခဲတောင်မှ ရေခဲများသည် ရာသီဥတု အခြေအနေကြောင့် တစ်ဖြေဖြေချင်း အရည်ဖျော်လာလိမ့်မည်။ (အခုလောလောဆယ် ဖြစ်ပွားနေသည်။)
လူလုပ်နေရောင်ခြည်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ နျူးကလီးယား နည်းပညာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (၂၀၀၈ ခုနစ် သုတေသနပြုချက်သည် ယခုအချိန်ထိ အကောင်အထည်ပေါ်နေသည်။
ရေအောက်လူ့ယာဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ (အပိုသုံး ဒြပ်စင်၏ အကူညီထောက်ပံ့မှုများနှင့်အတူ)
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် မိုးခေါင်ရေရှားမှု တွေ့ကြုံရမည်။
အဓိက မီးတောင် အရှင်ကြီး လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုကြီးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အပူဒဏ်လျော့ နည်းလာမှုကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး အေးခဲနိုင်သည်။
နေနှင့် အခြားကြယ်တို့ တိုတ်မိမှုကြောင့် ကမ္ဘာတွင် အလင်းရောင် ကင်းမဲ့မှုဖြစ်မည်။
ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင့် ကမ္ဘာမြေကို ကျောက်
အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်တွင် အငြင်းပွားဖယ်ရာကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီး တူညီသော ဂြိုလ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ဤ ဂြိုလ်တုပတ်လမ်းအားရိုသေ လေးစားမှုဖြင့်အတူတူ ကမ္ဘာဂြိုလ် ပတ်လမ်းကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
လကို ကြယ်တံခွန်မှ တိုတ်မိခြင်း
ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင့် ကမ္ဘာမြေကို ပြာ များနှင့် ကျောက်များ နှင့် ၀ိုင်းရံထားမည်။
ကမ္ဘာကြီးလည်း လက်တွေ့အသုံးမ၀င်တော့ပါ၊ ဇီဝမျိုးကွဲစုံတွေလည်း သေဆုံးမည်။ လျှပ်စစ် သံလိုက်ဓာတ်မရှိ၊ အလင်းရောင်မရှိ၊ တတ်တတ်ကြွကြွ လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း မရှိတော့ပါ။ လူသားများသည်လည်း ရှင်သန်နေထိုင်လို့ရသည့် ဂြိုလ်သားစနစ်ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းခံရမည်။
လူသားများကတော့ ထာဝရ ရှင်သန်နေသူများအဖြစ်ဖြင့် ဂြိုလ်သားများဖြင့်အတူ နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ မည်သူကမျှ အဆိုးမြင်စိတ်များ၊ မကောင်းသည့်စိတ်များ မရှိတော့ပါ။ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးတွင် စုစုပေါင်း ၃၅၀. ၀၀၀. ၀၀၀. ၀၀၀
လောက်နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကိုလည်း တိုတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ကြလိမ့်မည်။
Source | Witty Feed
သင်က ကြက်နှစ်ဖွား တစ်ဦးလား?
January 26, 2017 Horoscope
ကြက်နှစ်မွေးသူတို့၏ ထူးခြားသည့် ပင်ကို အရည်အသွေးများတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။?
စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူများမှ လူအများစု မက်လေ့ရှိသော အိမ်မက်9မျိုးနှင့် ထိုအိမ်မက်များ၏ အဓိပ္ပါယ်
January 11, 2017 Horoscope